Febraayo | 2012 | WEEJIDOW
Archive for Febraayo, 2012
DAAWO: WAFDIGII DOWLADA OO BAYDHABA JANAAY TEGEY IYO QURUXDA BAYDHABA
War deg deg ah: Wafdigii Dowlada KMG Ee Maanta Gaaray Baydhabo oo Kulamo la qaatay Saraakisha Dowlada iyo kuwa Ethiopia
Waxaa goor dhoweyd ka degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo laba diyaaradood oo ah kuwa qumaatiga u kaco ee heelikobtarada kuwaasoo waday wefdi uu horkacayay WASIIR ku-xigeenka Gaashaandhiga COL. CATOOSH oo ka soo jeeda DIGIL Iyo MIRIFLE.
Mas’uuliyiintaani oo uu horboodayo Wasiirka Gaashaandhiga dowladda KMG Xuseen Carab Ciise ayaa waxaa ka mid ah wasiirka Caafimaadka C/casiis Sheekh Cali, ku xigeenka wasiirka Gaashaandhiga iyo Taliyaha ciidamada xooga dalka Soomaaliya C/qaadir Sheekh Cali Diini.
Waxaa Kaloo wefdiga Wasiir ku xigeenka Gaashaandhiga COL. CATOOSH ayaa waxaa kamid ah wasiirka caafimaadka dowlada KMG Soomaaliya Dr. C/casiis Sheekh Yuusuf iyo weliba xildhibaano badan oo DIGIL Iyo MIRIFLE Iyo Soomaalida kale oo katirsan baarlamaanka KMG Soomaaliya.
Markii ay gaareen magaalada Baydhabo Madaxdaasi ayaa waxaa halkaasi kusoo dhaweeyay Saraakiisha ciidamada dowladda sida Xildhibaan Max’ed Ibraahim Xaabsade, Afaraale , Duqa gobolka Bay C/fitaax Geeseey iyo Madax ka tirsan kuwa Ethiopia.
Wefdiga wasiirka ku-xigeenka gaashaandhiga ayaa waxaa si diiran ugusoo dhaweeyay magaalada Baydhabo saraakiisha iyo maamulkii dowlada KMG ee gobolka Bay iyo weliba qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Baydhabo.
Diyaaradaha wefdiga geeyay magaalada Baydhabo ayaa waxaa iska leh shirkada SKA ee gacanta ku hayso eeraboorka magaalada Muqdisho.
Wasiiradan ayaana Magalada Baydhabo kulamo kala goni ah kula qaatay Bulshada iyo Saraakiisha Ciidanka kuwaa ee ka wareesanayeen Xaalada Magaalada Baydhabo iyo Isbadalada kajira tan iyo markii ee la wareegeen Ciidamada Dowlada iyo kuwa Itoobiya.
Wasiir kuxigeenka Gaashaandhiga Xukuumada KMG ee Soomaaliya ayaa sheegay in Maanta Magaalada Baydhabo kusoo arkeen arin layaab iyo fajiciso kunoqotay kadib markii ee arkeen Xaasas ee qabeen Saraakiil katirsaneed Dowlada iyo Masuuliyiin kale oo Shabaab xog ku guursadeen iyaga oo la qabay
Wasiirka ayaa sheegay in markii ay taasi arkeen ee aad ula yaabeen dhibaatada inta ala eg ee Shabaab ku hayeen Shacabka Soomaaliyeed iskana guursanayay haween si xalaal ah loo qabo.
Warkan uu caawa Sheegay Wasiir kuxigeenka Gaashaandhiga Xukuumada KMG ee Soomaaliya ayaa ahaa hadalo horey usoo baxayay oo sheegayay in Al-Shabaab iyo Dagaalyahanada Al-qaacida ee xoog ku guursadaan Haweenka ee qabaan Raga katirsan Dowlada oo iyagu ka aaminsanyihiin kuwa Diinta ka baxay xaasaskoodana ee ka furmaan lana guursan karo.
Xubnaha wafdiga uu hoggaaminayay R/wasaare ku xigeenka ayaa waxa ay kulamo kala duwan la qaateen Xildhibaanno uu ka mid yahay Xaabsade, Aadan Madoobe ku sugan halkaasi, mas’uuliyiinta maamulka gobolka iyo sarakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa Ethiopia waxa ayna kala hadleen sidii loo adken lahaa amaanka magaalada iyo dadargelinta howlgallada ay ciidamadu dalka kaga xoreeynayaan shabaab iyo Alqaacidda.
WAR DEG DEG: Diyaarado Amisom Leedahay oo Markii ugu Horeysay Duqeeyey Al-Shabaabka Ceelasha Biyaha
Muqdisho (WAAJIDPRESS): Labo diyaaradood oo nooca qumaatiga u kaca ee loo yaqano “helicopters” ayaa goordhow gantaalo ku tuuray goobo ay ku sugnaayeen ciidamada Al-Shabaab oo ku yaalla deegaanka Ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho.
Labada diyaaradood ayaa sida dadka deegaanka sheegeen tan iyo saaka dul heehaabayey deegaanada Duleedka Muqdisho iyagoo ku dhowaaday degmada Afgooye.
Madaafiic lagu qiyaasay illaa labo ayey la dheceen meelo ay joogeen Al-Shabaab, sida uu Waajidpress u sheegay mid ka mid ah dadka ku nool Ceelasha biyaha waxaana markii diyaaradaha ay gantaalada rideen loogu soo jawaabay rasaasta qoriga lidka diyaaradaha ee Zu-23 loo yaqaano.
Dhawaqa hubka culus ee ay soo rideen Al-Shabaab iyo gantaalada ay tuureen diyaaradaha ayaa markaliya laga maqlayey hawada iyadoo dadka tirada yar ee ku haray deegaanada duleedka Muqdisho ay la argagexeen hubka culus ee ay maqleen.
Lama oga khasaaraha ka dhashay duqeynta diyaaradaha geysteen iyo madaafiicda ay Al-Shabaab ugu jawaabeen.
Xaalad kacsanaan ah ayaa ka taagan saaka deegaanada duleedka Muqdisho, waxaana gebi ahaan xirmay suuqa Ceelasha biyaha iyadoo goobihii waxbarashada sida dugsiyada iyo iskuuladana ay ardaydii fasexeen markii duqeyntu dhacday.
Qof jooga xaafada Lafoole oo ku dhow degmada Afgooye ayaa WAAJIDPRESS u sheegay inuu arkay ciidamo ka tirsan Al-Shabaab oo gawaarida dagaalka wata oo ku sii cararaya geedaha hoostooda si ay uga gabadaan diyaaradaha.
Wariye ka tirsan Shabakada Waajidpress oo arkay diyaaradaha ayaa sheegay in labada diyaaradood oo midabkoodu cad yahay ay ku qoran tahay calaamada “AU”.
Diyaaradaha oo si fiican loo arki kaarey ayaa dib ugu degtay xerada Xalane oo talis u ah ciidamada AMISOM oo duleedka koonfur kaga beegan garoonka diyaaradaha ee Muqdisho.
War deg deg ah: Dagaalo Faraha looga gubtay oo ka dhacay inta u dhaxeysa Magaalada Muqdisho iyo Afgooye
Waxaa Xalay Saqdii dhaxe Dagaalo Culus ee ka dhaceen inta u dhaxeysa Muqdisho iyo Afgooye gaar ahaan halka loo yaqaan Sarkuusta iyo guriga Maslax.
Dagaalka ayaa u dhaxeeyay Ciidamada AMISOM ee kaabayeen kuwa Dowlada KMG ee Soomaaliya iyo Xarakada Al-Shabaab oo dhinac ah iyadoona labada dhinac hub culus iyo mid fududba isdhaafsadeen.
Dagaalka ayaa ka danbeeyay kadib markii Ciidamo katirsan Al-Shabaab dhinaca Howdka weerar kaga soo qaadeen Fariisin Ciidamada AMISOM iyo kuwa Dowlada KMG ku lahaayeen halka looyaqaan Maslax.
Dagaalak ayaa ka dhashay Qasaarooyin dhimasho iyo dhaawac oo labada dhinac kala gaaray walow aan si rasmi ah loo heyn qasaaraha dhabta ah ee kala gaaray.
Sargaal katirsan Ciidanka Dowlada ayaa sheegay in Shabaab Weerarka soo qaadeen jab xoogana ee gaarsiiyeen kana dileen tiro kamid ah Ciidanka Al-Shabaab.
Xaalada goobihii lagu dagaalamay ayaa saakay caadi ah jidka u dhaxeeya Muqdisho iyo Afgooye ayaana saakay dadka iyo gawaaridaba ee si caadiyan u isticmaalayaan.
Saraakiil Cadaan oo dajisey Taatikadii Amaanka lagu sugi lahaa”Shabaab oo Madaxyada Darbiga kugaraacay”Xog”
Ayado Magaalada Muqdisho dhex sabeneyso xaalado kafac weyn u malegayaan kooxo aan u diirnixin shacabka ayaa xiligaan dowlada KMG Soomaaliya wado qorshayaal dib loogu soo noleynayo amaankii iyo hormarkii degaanka.
Waxa maalmihii ugu danbeesay magaalada muqdisho kusugnaa saraakiil Cadaan iyo African kasoo dajinaaye taatikadii amaanka muqdisho dib logu soonooleynaayo waxaana kamid ah qorshayaal lagu sugaayo muqdisho waa in Muqdisho loo sameeyo ilaa 2,000 Askari kasoo lagu magac daray Ciidamada fly scout kuwaas oo ah Ciidamada Madax jabiska ah.
Ciidamadaan oo ka kooban AMA lagu soo xuley 4.5 ayaa Afar iyo Labaatan saac kahowl geli doono magaalada muqdisho waxayna ciidamadaan loo qeybin donaa kuwa ganacsi yar yar kuyeelan doono hareeraha wadooyinka sida Caseeyaaal,Ukumo,Loos,iyo waxyaabaha yar yarka ay bulshada u baahantahe ku gedi doono hareeraha wadada isla markaa mishinada halkaas kafulin waxayna dhamaantooda kuhubeysnaan donaan Bastoolado.
Ciidamadaan aya noqon doono kuwa aqoon leh oo qaarkood laga soo xuli doono Jaamacadaha magaalada muqdisho waxaana ciidamadaan lagu fari donaa cid kasta oo kashikiyaan madaxa kajabin karaan ayagoo dul dhigaayo waraaqo cadeynaayo in ay dileen waxaana loo gudbin donaa Jaamacadaha muqdisho si dhalinyarada barata qeybta caafimaadka ku bar bartaan.
Sido kale Ciidamadaan ayaa laga soo xuli donaa guud ahaan dalka somaliya ayagoo degmooyinka muqdisho dhamaantooda lagu daadin doono waxaana qeyb kanoqon doono dumar rag farabadan waxayna kulabisan donaan dharka caadiga ah si aan looga dareemin .
Ugu danbeyntii Ciidamadaan aya laga her geliye dowlado farabadan ayadoo kadhisantahe dalka aan jaarka nahay ee kenya waxaana fekerkeyda lahaa Sargaal katirsan Ciidamada Milateriga Dalka mareekanka waxayna caqabad kunoqon doontaa dagaal-yahanada shabaab oo dilal kageesta muqdisho waxaana sahlanaan doonta in si fudud loo toogto shaqsigii lagu dareymo waxyaabo lidi ku ah amaanka hadii si dhab loo taabo galsho taatikadaan dajiyeen saraakiishana waxa wax badan iska badali doono amaanka caasimada sida ay qabaan xeel dheerayaal dhanka amaanka ah.
Puntland oo Sheegtay In ay Qabatay Wiil 10-Jir ah Oo Qaab Ciidan Loo Tababaray
Boosaaso[Waajidpress): Dawladda Puntland ayaa sheegtay galabta in Buuraha Calmadow ku jiraan rag Argagaxiso ah balse aysan Shacabweynaha ku dhaqan Puntland u qaadan in ay yihiin maleeshiyo Beeleed kasoo jeeda dadka kunool deegaanka kuwaas oo ah argagaxiso Caalami ah oo meesha isku soo aruursatay si dadka u dhibaateyso aan waxba galabsan.
Wasiir Kuxigeenka Wasaaradda amniga Dawladda Puntland Cabdijamaal Cismaan Maxamed ayaa galabta sheegay in muddo badan ay ka hadleen una sheegeen dadweynaha Puntland in buurtaas Calmadow ku jiraan rag Argagaxiso Caalami ah balse aysan ahayn maleeshiyo qabiil ama Jabhad dawladda Puntland mucaarad ku ah oo xun ku dagaalamaysa balse kuwa shacabka dhibayaa ay yihiin.
…..”‘Waxaan rabaa in aan maanta ka fa’idaysto wax badan baa lagu sheekeyn jiray buurtaas Calmadow waxaa ku jira Maleeshiyaad Beeleed ah deegaanka dadka ah, wax badan baanu ka hadlnay anagu Warbaahinta inaanu dadkaasi ahayd dad beesha dega ah inaaney ahayn Maleeshiyo beed qabiil ama Jabhad ah oo dawladda Puntland Mucaarad ku ah iaaney ahayn in dadkaasi yihiin dad argagaxiso ah oo meesha isku soo aruursaday oo qeyb ka ah argagaxisada Caalamiga ah ……”‘ayuu yiri.
Md. Cabdijamaal Cismaan Maxamed ayaa xusay in marba haddii afkooda ka qirteen in ay yihiin agagaxiso welibana ay ku dhawaaqeen in ay yihiin Al-Qaacida ay tahay ALXAMDULILAAHI RABILCAALAMIIN taas oo ay Puntland horey u ogsooneyd balse ay la yaab ku tahay Caalamka oo sida uu sheegay muddo badan dhagaha ka furaysanayey hadaladii Puntland taas oo aysan weli fahmin.
Sidoo kale Cabdijamaal ayaa xusay in dhawaan ay gacanta ku dhigeen wiil 10-jir ah oo ay Irbad kaga dhufsaneyd dhanka gacanta bidix kaas oo loo tababaray furfurida AK-47 iyo qaababkii kale ee Ciidan,wuxuuna noo sheegay xogo badan oo muhiim ah iyo in Sanka wax laga siiyey isagoona si aad ah u dhaleeceeyey goobaha lagu barto quraanka kuna tilmaamay kuwa qaarkood u furtay inay si khaldan u Isticmaalaan balse gebi ahaantood aysan wada ahayn kuwa falalkaas ku kacaya.
…..”‘ Dadka reer Puntland waxaan u sheegayaa maalin dhaweyn inan yar oo 10-jir ah bay hay’adaha amnigu qabteen oo hadda aabihii Gaalkacyo uga yimid inankaasi irbad baa ku dhufsaneyd qoriga AK-47 wuu furfurayaa qaabkii ciidan ahaa oo dhan baa loo tababaray ,waxyaabahaas oo dhan waxay ka yimaadaaniin malcaamadaha sida qaloocan u shaqeeya mana wada oran karo malcaamadaha oo dhan weeye balse waxaa Jirta qeyb si khaldan u shaqeysa oo marka u badaka waalidiintu u gaystaan si khaldan u isticmaala damiirkoodana badela dhanka bidixda ah buu ka talaalnaa wuxuuna noo sheegay in sanka wax laga siiyey…”ayuu sidoo kale sheegay.
Gabagabadii ayaa dadweynaha reer Puntland uu u sheegay in amniga Putland maanta uu yahay 100%, iyadoona ay si weyn ugu halgameen laamaha amniga Puntland taas oo in badan ay iska kaashadeen shacab,dawlad iyo Xukuumadba in la helo dadka dhibaatada bulshada dhexdeeda ku haya isagoona tilmaamay in kuwa dhibaatada wadaa aysan wakhtiga iska lumin loona dirayo fariin ah in Puntland shacabkeedii uu soo Jeestay.
War deg deg ah: Agaasimihii Idaacada Somaliweyn oo Muqdisho lagu diley maanta
Muqdisho (WAAJIDPRESS): Rag hubeysan ayaa goordhow degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho ku toogtay agaasimihii Idaacadda Somaliweyn Abuukar Maxamed Kadaf.
War deg deg ah: Diyaarado Hadda Duqeeyey duleedka Baardheere
Wararka ka imaanaya Degmada Baardheere ee Gobolka Gedo ayaa sheegaya in Deegaano kudhaw Degmadaasi ee duqeeyeen Diyaaradaha Dagaalka Kenya kuwaa ee ka dhasheen Qasaarooyin kala duwan.
Goobaha la duqeeyay ayaa la sheegay in ee ahaayeen saldhigyo Ciidan ee kusugnaayeen Ciidamo katirsanaa Xarakada Al-Shabaab oo ku yaalay Deegaano kudhaw Degmada Baardheere.
Saraakiil u hadashay Dowlada KMG ee Soomaaliya ee kusugan Gobolka Gedo ayaa sheegay in Duqeyntaaasi loo geestay Saldhigyada Ciidan ee Al-Shabaab ee ka dhasheen Qasaaaooyin badan oo isugu jira Dhimasho iyo Dhaawac.
Al-Shabaab iyadu wali kama hadlin duqeynta Culus ee loo geestay Saldhigyada Ciidan ee ku leeyihiin Deegaano ku dhaw Degmada Baardheere ee Gobolka Gedo.
Wararka aan ka heleyno Degmada Baar Dheere ayaa sheegaya in saacadihii ugu danbeeyay Isbitaalka kuyaala Degmadaasi la keenayay dhaawacyo la rumeesanyahay in Shabaab yihiin waxyeelana ee kasoo gaartay Duqeyntii loo geestay Saldhigayada Ciidan.
Degmada Baar Dheere iyo Deegaano kale oo katirsan Gobolada Gedo iyo Jubooyinka ayaa bartilmaameed u noqday Duqeymo culus ee Diyaaradaha Dagaalka Kenya ka geestaan kuwaa oo lagu bartilmaameedsado Al-Shabaab.
Bal arag Madaxweyne sheikh Shariif eexda uu suubiyey
Qormadeena 1-aad waxaanu ku eegeeynaa Madaxweyne Shariif waa side Cadaaladiisa ,anagoo ku bilaabeeyno inuu xitaa noqon nin u eexdo qabiilkiisa balse noqday nin sedbursi siiya raaska uu dhashay ee Rati Abgaal.
DAAWO: HEESTII SOOMAALI BAAN AHAY
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Febraayo, 2012.